🥇 ▷ Kolonyo H1: Kolonyo & # 039; s wejiga koowaad vs. dadka skilhunt H03 ✅
Kolonyo H1: Kolonyo & # 039; s wejiga koowaad vs. dadka skilhunt H03
Soo-saareyaasha ugu caansan ee tooshyada miisaaniyada ayaa ugu dambeyn dhaley wejiga koowaad. Convoy H1 waxaa laga sameeyay isla qaab qaab L-qaab leh oo leh iftiin dhexdhexaad ah, marka waxaa haboon in loo fiirsado haddii carshigu ku xayiran doono mid “caan ah” oo noqday labadii sano ee la soo dhaafay, maadaama aysan jirin wax kuubanno ah kii u dambeeyay. saddex bilood. Guud ahaan, waxaa jira sabab cad oo dib loogu eego Convoy H1 vs Skilhunt H03
halkaan xitaa trophis waxaa loo jiiday dhinac dhinac…
xagee ka iibsan karaa? ama
Baakadaha iyo muuqaalka
Kiis naadir ah oo ah kolonyada ayaa ah xirmo xoogaa hagaagsan, waxaan si uun u arkay mid S2 + ah. Dabcan, way ka xuntahay kuwa soosaarayaasha kale oo dhan, laakiin tani ugu yaraan ma aha gabal xumo xun ee kartoonnada khafiifka ah oo ay kuxiran yihiin moodooyinka kale oo dhan. Waxaad kala hadli kartaa nooc ka mid ah hadiyadaha kaliya fidin.
Gudaha, weelka xumbada leh ee wejiga ku yaal, wejiga madaxa kor u goosan iyo galka. Wax intaa ka badan ma jiraan, dalool la’aan, tilmaamo la’aan.
Mashiinka madaxa lagu xiro runtii waa raqiis. Waxaan hadda sameynayaa dib u eegis labo nooc oo pennies ah oo raqiis ah oo leh ali, sidaa darteed dharka xajista ayaa ka fiican halkaas. Sidoo kale, xanjada halkan waxay umuuqataa mid aad u jaban. Isku soo wada duuboo, miisaaniyad aasaasi ah dhammaan xumaanshaheeda. Uma dhawa in la barbar dhigo xirfadda.
Heerka wuxuu ku fadhiyaa si adag, laakiin ma ahan mid aad u adag, waa wax fiican, ma xoqdo kuleylka. Waxay leedahay godad daloolka, waad ku lalmi kartaa, haddii loo baahdo. Sidoo kale way fiicantahay.
Hagaag, halkan waa wejiga laftiisa. Adag, bakhti xoog leh oo qaab ah ayaa kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho Convoy H1 sidoo kale guban dabeed. Muuqaalku waa mid hagaagsan, aadna u heerkiisu yahay moodooyinka kale ee kolonyada. Iyadoo aan lahayn khiyaamo naqshadeeye leh, laakiin muuqaal adag oo aan dagaal lahayn
Cabbirada ayaa xoogaa yar ka weyn sidii la filayay, inta badan waxaa ugu wacan dhumuc weyn oo bakhtigu leeyahay. 3mm waa wax badan, si daacadnimo ah u hadlida.
waxaa jira sawir isbarbar-dhig oo wanaagsan oo ka socda of this dib u eegis
Dhanka culeyska, waa la’aan la’aan batrool leh feyl 74g in meel 30g ka badan xirfadda. Markaad xirnaato muddo dheer, farqigaani wuxuu u muuqan karaa madaxa qaar.
Guga dhinaca dabada ayaa leh qaro weyn, oo leh xayndaab weyn. Guga xaggiisa dhinaca madaxa ayaa ka khafiifsan.
Wejiga hore waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood.
Dunta ku taal dhinaca dabada ayaa aad u ballaaran, afar gees ah, madaxa iyo saddexagalka yar, caadi ahaan labada dhinacba way seegeen.
Burcadu waxay i soo xusuusisay sida wanaagsan ee loo yaqaan ‘liin’ ‘oo ay weheliso xarumo labajibaaraneyaal yaryar oo yaryar oo ku dhex jira kuwa waaweyn ee waaweyn. Way iska cadahay in qaabkani yahay waxyar oo xarrago leh, laakiin aad bay uga wanaagsan tahay dhinaca aragtida isku halaynta xajinta. Uma maleynayo in iibsadayaasha wejigan wejiga hore ee arrimaha ay ka muuqato ay leeyihiin arrimo culus.
Xaqiiqdii, qabsashada gacmaha halkan ayaa ah arin labaad, ka dib oo dhan, waxaan ka hadleynaa madaxa wejiga. Laakiin, sida uu horay u sheegay, runti waa mid la isku halleyn karo. Waa iska cadahay inaadan ka badin sida ugu habboon ee loo isticmaalo wejiga L-qaabkiisu yahay xarig gacanta, laakiin dhexroorkii loo yaqaan ‘Convoy H1 dhexroor’ wuxuu ku fadhiyaa si amaan ah gacantaada.
Badhanka dibedda ka fudud, badhanka halkan wuxuu si cad u siinayaa qaybta qiimaha ee Convoy H1. Dhanka kale, waa wax iska caadi ah oo cabbirkiisu dhexdhexaad yahay, wuxuu ka sarreeyaa bakhtiga waana sahlan tahay in la helo. Waxay ku dhaqaaqaysaa iyadoo la arki karo oo la arki karo – guud ahaan, way ku habboon tahay in la isticmaalo. Haah, haa, waxaa jira iftiimin iftiin leh. Waxay u shaqaysaa oo keliya dheecaan qoto dheer, waxay bilaabaysaa inay ku dhalaaliso casaan.
Isla markiiba isla waqtigaas, waxaad aragti ahaan u qiimeyn kartaa qoto dheer ee qulqulka qaboojinta.
Madaxa ayaa weyn oo ku filan futada, laakiin waxaan kaliya ku arkaa wax intaas ka badan, wax walba waxay kufiican yihiin qulqulka kuleylka.
Glass leh iftiin.
Haddii aad leedahay qalabka wax lagu buufiyo oo sanka wareega ama kuwa loo furo saacadaha, si fudud waad u qalloocin kartaa garka. Hoos waxaa ku yaal muuqaal iftiin leh oo ka kooban cabbirada caadiga ah ee wejiga. Marka, hadda si dhow ayaan u eegay, waxay umuuqataa in qoto-ifka milicsiga lagu cabiray galaas, markaa waa halkii 10mm.
Qeybta hoose ee XM-L2 aad ayey caan u tahay.
Taasi waa intaas oo dhan, laga yaabee. Wejiga hore ee wadnaha ayaa ku yaal dhammaan waxyaabaha kale ee kolonyada geeya. Maaha udub dhaxaadka naqshadeynta, kaliya uun waxqabadka ah iyo gizmo raqiis ah
Fudud laakiin aan xad dhaaf aheyn.
Ku darista adigoo gujinaya Bakhtii xajinta
Hababka beddelka adigoo gujinaya
waxaa jira si dhakhso ah u helista Low of off on hakinta.
Convoy H1 shaqada.
Nalka dhexdhexaadka ahaad ugu qanacsantahay ka shaqeynta dhow. Waxaan is tusay in xawaaraha masaafada gaaban ay ka buuxaan culeys dheeri ah oo ku yaal bartamaha (muuqaalka firfircoon ee kaameeraha ayaa ka cidhiidhisan isha aadanaha, kaasoo u arkaa iftiinka mid aad u badan oo isku mid ah), marka markan ma aanan sameynin halkan, fiiri sawir masaafad gaaban, waxaan u maleynayaa inay caddaan doonto.
Ma jiro fogaan firfircoon oo laga arki karo PWM nooc kasta.
Xasaasiyadda? Ma qosolbaa? Marka turbo waa inaad isticmaashaa taxaddar, toosh Runtii xoogaa diirimaad yar.
Xasilinta… Hagaag, jadwalka caadiga ah ee halkan inta badan ee kolonyada waa hoos u dhac tartiib tartiib ah oo dhalaalaya ah marka baterigu sii daayo. Siidaynta eber ma shaqeynayso, meel baaxaddiisu tahay 2.7v. Meel isla aagga ah, tilmaameha cas wuxuu bilaabaa dhalaalaya. Maxaa la yaab leh – diidmada Panas waxay u shaqeysay si ka sareysa heerka sare ee Samsun 35E.
Hagaag, noolow, waxaan sameeyay sawirro badan.
Way iska cadahay ka shaqeynta dhererka cududa, dhalaalku inagu filan. Ka dibna waxaa jira jamb muuqda oo ah qaab dalool u dhexeeya Mid-High. Sida saxda ah ee loogu talagalay in lagu waafajiyo nooc ka mid ah amarkii 130-150lum. Xirfadeysanuhu xirfad kumalaha dhibaatadan gabi ahaanba, waxaa jira heerar dhalaalaya oo aad u badan baahi kasta.
Guud ahaan, maan arkin farqi weyn markii aan la shaqeynayay hababka dhexe. Si ka saxsan, waxaa jira xoogaa farqi ah oo ku saabsan qeybinta nalka, laakiin markii si dhab ah loo isticmaalo, fikradeyda, waa la iloobi karaa.
Faallooyinkaan, sababao qaar, ma jiri doonaan goobo caan ah. Waxaan ku xaddiday doonaa hal aqal xagaaga. Laakiin waxaan hubaa in sawirada (+ fiidiyowga dib-u-fiirinta) aad ku sameyn karto aragti wanaagsan.
Mabda ‘ahaan, dhaqdhaqaaqa iyada oo aan halista ah in isha laan laga helo oo duulista loo duuliyo, Mid ayaa ku filan, tani waa wax iska caadi ah dhaqdhaqaaqa firaaqada.
In kasta oo wejiga hore looma jeedin in loo iftiimiyo masaafada dheer, xaaladaha jira wax la mid ah waddo mugdi ah, waxay ifin kartaa wax kasta oo ilaa hadda ku filan.
Dib-u-fiirinta fiidiyowga waxaa sidoo kale jira tusaalooyin cadaalad ah oo cad oo ku saabsan hawlgalkan tooshkiisa qaabab kala duwan.
Kolonyo H1 ayaa ka fog wejiga ugu fiican, laakiin Qiimahaaga oo leh kuuban Waxaan u maleynayaa inaad indhahaaga ku xiri karto khaladaadkiisa, hadaan ka hadlayno adeegsiga maalin walba. Waxaan ku sixi lahaa inay tahay “ok, way sameyn doontaa.” Maaha “oh, fiican, ma xuma,” iyo gaar ahaan maahan “zbs, labo sii!”. Marka loo eego, farqiga qiima yar ee H03, qaabkan yar ee xiisaha leh wuxuu noqon doonaa. Iyo garaacista.
Iyo Convoy H1 xaqiiqdii way fiicnaan lahayd iyadoo yar, dhab ahaantii, oo aan saameyn ku yeelanaynin hagaajinta qiimaha – 100-150 habka lumens iyo dhamaadka birlabka. Haddii xirfadda lagu iibiyay qiimaheedii hore, oo aysan jiri laheyn kuubbo loogu talo galay moodelkan, waxay u badan tahay inaan ku dari lahaa 5-6 bucks oo aan qaadan lahaa xirfadda. Nasiib darrose, hadda ma jiro ikhtiyaar sidan oo kale ah.
Guud ahaan, wejiga hore waa islaamiyo caadi ah, oo kaliya qaabka wejiga. Wax sahlan, la awoodi karo oo wax ku ool ah oo aan lahayn wax buuxiya. Wax ka fiican, isla xirfad la mid ah nooc kasta oo dib u eegis h03 ah ayaa si aad ah qaali u ah. Iyo wax ka jaban ayaa ugu badnaan xoogaa boron ah. Guud ahaan, Uma maleynayo in qaabka uu hadda yahay, Convoy H1 jiideyso cinwaanka “dadka wejiga”. Laakiin waa wax macquul ah in nooca soo socda, haddii faallooyinkaa la tixgeliyo (oo aan horeyba wax uga qorey Simon oo ku saabsan iyaga) iyo qiimaha sicirku weli isku mid yahay, ayaa laga yaabaa inuu noqdo alaab kale oo kolonyo caan ah oo caan ah.
Dabcan, isagu ma soo jiidan doono darawalada taraafikada ee casriga ah oo leh nimco la’aan qaab dhismeedka iyo xakamaynta, daalka caadiga ah iyo maqnaanshaha nooca hi-CRI (in kasta oo, iyadoo la ogyahay hodantinimada xulashooyinka qaabeynta kolonyada, qofna ma ballan qaadi karo inuu jiro noqosho lahayn). Laakiin adeegsade fudud oo diyaar u ah inuu bixiyo 10-ka doollar ee dheeraad ah ee la xiriira deynta ama soo-dhaweynta wuxuu heli doonaa iftiin daboolaya dhammaan baaxadda baahiyaha qoyska maalin kasta.
Wax sidaas oo kale ah.
waana tan xulasho kale hoosta. dhammaantood waxay ku saleysan yihiin khibradda shaqsiyeed ee isticmaalka iyo dib u eegista, ma jiraan wax madhan.
– Sida loo doorto toosh. Kaliya waxay ku saabsan tahay waxa ugu weyn: waa maxay xaashiyaha, candelas, heerkulka midabka, LED T6, iwm.
– Xulo madaxa miisaaniyada aliexpress
– Toosh-ka-qiimo jaban oo qiimo-jaban leh oo wanaagsan oo leh Ali: Convoy C8 + XPL-Hi vs Convoy C8 XML-2 vs Ultrafire zoom
– Dooro toosh leh aliexpress qaybta 2: laga bilaabo $ 15 illaa $ 50
– Tooshka ugu fiican ee ugu wanaagsan ee leh aliexpress ch1 ama “ilaa $ 15 ama kaba sii dara”
– Xulashooyinka qiimaha ugu wanaagsan ee batari 18650 Li-Ion ah.
– Aaway dariiqa ugu jaban ee lagu iibsado kaararka micro-SD Cali
– Powerbanks waqtiyada oo dhan: ku dallacinta taleefanka gacanta iyo laptop-yada.
– Maxaad ka dooranaysaa laambada deegaanka
– Dooro toosh
—Top 5 saacadaha smart Amzfit ee aliexpress. Isbarbar dhig ee moodooyinka Xiaomi smart smart.